Isihloko ichaza ukuthi lesi Anthology njengoba kwenzeka, ngokukhethekile, asebenzelana ngayo iqoqo izinkondlo nekhompyutha imidlalo.
Kule nkathi ngokuchichima imikhiqizo ephrintiwe Kunzima ukucabanga ukuthi ngisho nangemva kweminyaka 150 edlule, iningi labantu abaphila emhlabeni, babengafundile. Le nkinga efanele namuhla: izwe namanje has a lot of amazwe emuva futhi ampofu, okuyinto ukhokhe imfundo abahlali zabo ukunakwa kancane kakhulu.
Kunobufakazi obubhaliwe njengoba enjalo Sekuyizinkulungwane zeminyaka, kodwa cishe njalo luhlala uhlobo ilungelo libe yisabelo ambalwa abakwazi ukukhokhela ukuchitha isikhathi nemali kufundza ngokwabo noma izingane zabo. By the way, ngisho e-Europe kwaba amakhosi futhi bengafundile, okwakubekelwa kubhekwe ngokuphelele evamile, futhi konke bakwazi - it is kuphela ukungena ngemvume ku-asemthethweni.
Kancane kancane, konke kwashintsha, futhi abantu ukubaluleka kwezincwadi, izincwadi kanye nekhono ukuzifunda. Kodwa zakukhuthaza kakhulu ukufunda Isisindo evilaphayo kakhulu, njengoba, ngokwesibonelo, eRussia isikhathi eside izikole sezenkolo kuphela, futhi eyimpoqo imfundo yamabanga aphansi wavela ekuqaleni kwekhulu XX.
Anthology - ke ...
Kodwa ngenhlanhla, manje kuhlukile, futhi emfundweni yamabanga aphansi kanye ayimpoqo savulwa ngo emazweni amaningi. Konke lokhu kuye kwabangela ukuba waba ukwanda okukhulu kwezincwadi inani abalobi nezincwadi ukuthi ngaphambili, futhi, ayembalwa kakhulu. Ikakhulukazi awusizo kule inthanethi - wasiza abalobi abaningi abasha kunyatheliswa ephepheni. Kodwa ukuze kube lula futhi unciphise ukudideka ngaso sonke isikhathi bafuna ukuhlanganisa izincwadi ku Anthology. Kuyini lokhu? Kulesi siyowuqonda.
Anthology - iqoqo imisebenzi ehlukahlukene etemibhalo eyodwa noma ngaphezulu abalobi. Kuzo zombili lezi zimo zihlobene jikelele indaba ephathwayo, uhlobo, noma ezinye izici, ngenxa le inyunyana imisebenzi ngaphansi ikhava eyodwa, noma uchungechunge lwezincwadi futhi okuye kwafezwa.
Igama lokhu beza kithi kusukela ulimi lwesiGreki sakuqala kanye nezwi lisho "inhlangano, inhlangano yabantwana izimbali, imbali ingadi."
Uma sikubeka kalula, Anthology - incwadi, inkondlo, noma umsebenzi wokubhala hlobo, okuyizinto for the lula futhi kube lula inzuzo okuningi ukubeka ibhuku elilodwa noma chungechunge. Izizathu lezi kungaba abaningi. Ngokwesibonelo, ngakho ukwenza yonke imisebenzi umlobi odumile noma abalobi ukushicilela iqoqo lezindatshana ezimnandi ezahlukene, kodwa izwi elazwakala alibazuzisanga, umcondvo wekutsi umsebenzi yonke noma izindikimba. Noma dala uchungechunge lwezincwadi, okuyinto, ukuhlangana abaseshi bonke abalobi abenze igama yena kule uhlobo.
Kuyinto efanayo ikakhulu ngenxa lula, kodwa kulezizinsuku linendima ebalulekile futhi inzuzo eyengeziwe. Njengoba le ndoda yabona i-Works ezihlotshiswe kahle kumbhali ozithandayo, cishe ngeke uyithenga, ngisho noma umkhiqizo esifanayo ngokwehlukile. Ngakho kuleli zwe lanamuhla Anthology - kuba umthombo eyengeziwe imali khona yabamemezeli.
I Anthology ngqa asankondlo laseRussia aqala ishicilelwe ekuqaleni kwekhulu XIX, engesiyo ngaphandle isizathu ebizwa ngokuthi izimbongi futhi abalobi bekhulu. Ukuze ezisekhona amagama kuphela kubalobi kunazo owaziwa futhi labo kukharikhulamu esikoleni, kodwa babebaningi kakhulu. Ngakho Nokho Anthology zezinkondlo Russian ngalezo zinsuku kwaba ethandwa kakhulu, njengoba manje. Nesinye isizathu sokuthokoza lokhu iqiniso lokuthi temibhalo yephrozi netindzaba (amanoveli nobe tindzaba letimfisha) ngenkathi kuphela kuyanda.
Manje lezi anthologies ashicilelwe ekuklanyweni amtoti, futhi ngaphansi ikhava wendalo kuhlangene njengoba yalotshwa umlobi oyedwa, isibonelo, Lermontov, nazo zonke ethandwa kakhulu ngaleso sikhathi.
Ngokuqinisekile izwi "Anthology" ajwayelane Cishe zonke ingane noma osemusha. Futhi akusiwona ukuthi namuhla izingane kangaka uyakuthanda ukufunda, nakuba iyatholakala. Ngaso nje kuyisiqalo computerization jikelele kanye nokusakazwa ebanzi imidlalo ye-computer zithandwa kakhulu Anthology yabo. Noma kunjalo, zenzeka kancane njalo, futhi bachuma ekuseni naphakathi no-kowezi-2000, lapho i-Inthanethi kwaba abantu abambalwa, bese abantu namanje ngenkuthalo ukuthenga ezivamile laser akwazi ukugcina equkethe imidlalo. Anthology wabo, yebo, kwaba pirate, kodwa bambalwa kakhulu abantu sithule.
Njengoba kunjalo nezincwadi, umdlalo futhi ayehlangana nganoma yisiphi isici esithile. Ngenxa amateur "abacibishelayo" Mancane amathuba okuthi abe nesithakazelo iqoqo lapho nezinye izinhlobo axutshwa. Ngezinye izikhathi Anthology sokuhlanganisa zonke ingxenye umdlalo ofanayo, noma ngisho efanayo kakhulu uhlobo. Naphezu ikhwalithi embi futhi njalo "zabagovannost" umdlalo namanje engathandwa, njengoba kwakufanele kancane kakhulu kunalokho izincwadi ilayisensi, futhi liqukethe nje cishe imidlalo kweshumi, kunokusebenza amalayisense elilodwa noma amabili.
Ngakho saxoxa ukuthi lokhu Anthology. Njengoba ubona, igama elisetshenzisiwe lithi hhayi kuphela maqondana izincwadi. Ngezinye izikhathi ungase uthole ngisho iqoqo izinhlelo computer.